festive offer(festive offer) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
काठमाण्डौ । एनआइसी एशिया बैंकले ग्राहकहरुको उल्लासमय सहभागिता र सुझावलाई मध्यनजर गर्दै एनआइसी एशिया रेमिटको चाडपर्व योजना संचालनमा ल्याएको छ । यस योजनाअन्तर्गत अब एनआइसी एशिया रेमिटबाट नेपालभित्र एकपटक रकम पठाउँदा अर्को पटक सित्तैमा पठाउन पाउने व्यवस्था बैंकले गरेको छ । बैंकले आगामी चाडपर्वको अवसरलाई ध्यानमा राख्दै समस्त...
रिया आइएमईले घोषणा गर्यो ४ भाग्यशालीको नाम, को-को परे ?
काठमाण्डौ । मलेसियास्थित रिया आइएमईले दशैं र तिहारको अवसरमा ल्याएको ‘दशैं तिहारमा आइएमई गर्नुहोस् घर सजाउनुहोस्’ नामक सेवाग्राहीमुखी व्यापार प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमअन्तर्गत दोश्रो तथा अन्तिम भाग्यशाली विजेता घोषणा गरेको छ । सफ्टवेयरमा आधारित रहेर गरिएको छनोट कार्यक्रममा रिया आइएमईका चारजना भाग्यशाली सेवाग्राहीहरु...
काठमाण्डौ । नेपाल टेलिकमले नेपालीहरुको महान चाड पर्वहरुको उपलक्ष्यमा विगत वर्षहरुमा जस्तै यस वर्ष पनि कम्पनीका सेवाहरुमा विभिन्न प्रकारका छुट तथा अफर उपलब्ध गराएको छ । कम्पनीले तिहार तथा छठको अवसरमा कात्तिक १ देखि १५ गतेसम्म प्रयोग गर्न सकिने गरी विभिन्न अफर उपलब्ध गराएको छ । १. रिचार्जमा बोनस: जिएसएम तथा सिडिएमए प्रिपेड मोबाइलमा...
काठमाण्डौ । राजधानीको मुटु जमलमा रहेको विश्वज्योती मलमा दशैं तिहार सुपर छुट अफर सुरु भएको छ । दशैं तथा तिहारलाई लक्षित गरी मलले असोज ३ गतेदेखि उपहार योजना सुरु गरेको हो । उपहार योजना अवधिभर विश्वज्योति मलमा सामान खरिद गर्ने सेवाग्राहीले उपहार नै उपहार पाउने मलले जनाएको छ । कात्तिक २५ गतेसम्म चल्ने उपहार योजना अवधिमा मलको कुनै पनि...
काठमाण्डौ । दशैंतिहारको बहार, ताम्राकार कम्प्लेक्समा मोबाइल किन्दा उपहार नै उपहार योजना अन्तर्गत पहिलो मोटरसाइकल शसेन्द्र बिक्रम चौधरीले पाएका छन् । उनले ताम्राकार कम्प्लेक्समा १५ हजार पर्ने एमआइको एवान ४ ए मोबाइल किनेका थिए । दैनिक मोबाइल, पावर बैंक र अन्य एशोसरिज लक्की ड्रबाट बितण गर्दै आएको ताम्राकार मोबाइलले राखेका ३ वटा...
काठमाण्डौ । काठमाण्डौंको गोगंबुस्थित नयाँ बसपार्कमा रहेको बिजी मलले दशैंतिहार लक्षितउपहार योजना सुरु गरेको छ । चाडपर्वका बेला ग्राहकलाई सुपथ मूल्यमा उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउँदै १ हजार रुपैंयाभन्दा बढीको सामान खरीदमा उपहार बितरणको लक्ष्यसहित मलले असोज २ गतेदेखि योजना सुरु गरेको हो । फ्यान्टास्टिक दशैंतिहार हरेक दिन उपहार...
काठमाण्डौ । नेपाल टेलिकमले नेपालीहरुको महान चाड विजया दशमीको उपलक्ष्यमा विगतका वर्षहरु झै यो पटक पनि छुट तथा विभिन्न अफरको बहार ल्याएको छ । टेलिकमले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दशैं अफरको बिषयमा जानकारी दिएको हो । दशैंमा कुन सेवामा कस्तो छुटको अफर छ, हेरौं सूचि: १. रिचार्जमा बोनस: जिएसएम तथा सिडिएमए प्रिपेड मोबाइलमा रिचार्ज...
काठमाण्डौ । लेटेस्ट र ब्राण्डेड मोबाइलको कारोबारमा ख्याति कमाएको सिटिभी मोबाइलले मोबाइल खरिदकर्तालाई हात खाली नजाने उपहार योजना ल्याएको छ । ताम्राकार मोबाइल कम्प्लेक्सको पहिलो तल्लामा रहेको सिटिभी मोबाइलले बम्पर उपहारमा आरवान फाइभ मोटरसाइकल, मलेसिया सिंगापुर भ्रमणको प्याकेज र आइफोन सेभेन पाउने योजना समेत ल्याएको छ । दशैं र...
आइएमईबाट पैसा पठाउँदा ६ लाखको जीवनबिमा !
काठमाण्डौ । यसपटकको दशैं, तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरी आईएमईले ल्याएको ‘आईएमई छक्का–पञ्जा’अफर अन्तर्गत पहिलो १५ दिनको जीवन बीमा आईएमई सेवाग्राही पर्वबहादुर राईले प्राप्त गरेका छन् । सफ्टवेयर पद्वतिमा आधारित छनोट कार्यक्रममा मलेशियास्थित रिया आईएमईबाट नेपालमा पैसा पठाउने राई भाग्यशाली विजेता छनौट भएका हुन् । भाग्यशाली...
कुलेश्वरमा गौतमश्री मार्ट, २०% सम्म छुटको अफर
काठमाण्डौ । गौतमश्री बिजिनेश ग्रुपले संचालनमा ल्याएको गौतमश्री मार्टको दोस्रो आउटलेटले शनिबारदेखि औपचारिक कारोबार सुुरु गरेको छ । मार्टको समुद्घाटन पूर्वमन्त्री अग्नि सापकोटा र गृह राज्यमन्त्री श्यामकुमार श्रेष्ठले संयुक्त रुपमा गरे । मार्ट उद्घाटमा पूर्व सचिब कृष्णहरि बास्कोटा, राष्ट्रिय ब्यापार संगठनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष...
बीओकेका कार्डधनीलाई गन्गोर फूडमा १०% छुट
काठमाण्डौ । दशैंतिहारको अवसरमा बैंक अफ काठमाण्डूले आफना सबै कार्ड धनी ग्राहकहरुका लागि काठमाण्डौको कमलादीस्थित गन्गोर फुड एण्ड सर्भिसेसमा १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । बैंकले आफ्ना सबै डेबिट र क्रेडिटकार्ड धनी ग्राहकहरुका लागि गन्गोर फुड एण्ड सर्भिसेसमा कार्तिक ३०, २०७४ सम्मका लागि यो छुटको व्यवस्था गरेको बताएको छ । ...
ताम्राकार कम्प्लेक्समा मोवाइल महोत्सव सुरु, ६०% सम्म छुटको अफर
काठमाण्डौ । मोबाइल बजारको पर्यायका रुपमा रहेको काठमाडौंको न्यूरोडस्थित ताम्राकार मोबाइल कम्प्लेक्समा ‘दशैं तिहारको बहार ताम्राकारमा मोबाइल किन्दा उपहार नै उपहार’नारासहित मोवाइल महोत्सव सुरु भएको छ । बिहीबारदेखि सुरु भएको यो मोबाइल मेलाको मुख्य प्रायोजन मोटोरोला र लेनेभो मोबाइलले गरेका छन् । ताम्राकार मोबाइल बजारले मेला...
इलेक्ट्रोलक्सको फेस्टिभ अफर, हरेक खरीदमा नगद उपहार
काठमाण्डौ । युरोपको नं. १ ब्राण्ड इलेक्ट्रोलक्सले नेपालीहरुको महानपर्व दशैं, तिहार र छठलाई लक्षित गर्दै “दशैं तिहारमा उपहार स्योर सट ” योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस उपहार योजना अन्तर्गत ग्राहकहरुले फ्रिज, वासिङ मेसिन, डिस वासर, चुल्हो, चिम्नि र एयर कन्डिसनरकोे हरेक खरिदमा रु. १७९० रुपैयाँदेखि २१ ह्जार ९०० रुपैयाँसम्मका विभिन्न...
दशैं तिहारको बहार, ताम्राकारमा मोबाइल किन्दा उपहार नै उपहार !
काठमाण्डौ । मोबाइल बजारको पर्यायका रुपमा रहेको काठमाडौंको न्यूरोडस्थित ताम्राकार मोबाइल कम्प्लेक्सले दशैं तिहारको बहार ताम्राकारमा मोबाइल किन्दा उपहार नै उपहारको योजना ल्याएको छ । भदौ २२ गतेदेखि गरिन लागेको यो मोबाइल मेलाको मुख्य प्रायोजनमा मोटोरोला र लेनेभो मोबाइलले साथ दिएका छन् । यो महोत्सवमा सबै मोबाइल कम्पनीको साथ पाएको...
तीजमा एनटिसीले दिएको अफरको समय थप, असोज ४ सम्म छुटै छुट
काठमाण्डौ । नेपाल टेलिकमले बुबाको मुख हेर्ने दिन तथा तीज पर्वको अवसरमा उपलब्ध गराएका विभिन्न अफरलाई निरन्तरता दिएको छ । अफर अन्तर्गत जीएसएम प्रिपेड/पोष्टपेड मोबाइलमा युट्युब डाटा प्याकेज र डिस्काउन्टेड भ्वाइस डाटा प्याकेज रहेका छन् । गत भदौ ५ देखि १९ गतेसम्म उपलब्ध यी अफरहरु उपभोक्ताले अत्यधिक रुपमा रुचाएकाले भदौ २० गते देखि आगामी...